I-Google Home izoshibha kune-Amazon Echo | Izindaba zamagajethi
Emcimbini wokugcina we-Google I / O sihlangane nedivayisi entsha ye-Google ebizama ukuncintisana ne-Amazon Echo ngokunikeza omunye umsizi wasekhaya. Le divayisi yabizwa Ikhaya le-Google, igajethi ebinomklamo okhangayo ukulingana nemiklamo ehlukahlukene esingayithola ezindlini.
Kuze kube manje besingazi okuningi mayelana nedivayisi ye-Google, kepha muva nje asazi intengo kuphela leyo divayisi ezoba nayo kodwa Izokwethulwa nini le mbangi ye-Amazon Echo?, sisondelana kakhulu kunendlela esicabanga ngayo.
Kubonakala sengathi Ikhaya le-Google lizobiza u- $ 130, okungama-dollar angama-50 kushibhile kune-Amazon Echo. Kukhona nokukhuluma ukuthi iGoogle Home izoba yethulwe ngokusemthethweni emcimbini olandelayo weGoogle ngo-Okthoba 4, okungukuthi, izokwethulwa ngama-Google Pixels amasha.
I-Google Home izohambisana ne-Chromecast entsha nama-mobiles amabili, ngo-Okthoba 4
Kepha i-Google Home ngeke kube ukuphela kwento ezokwethulwa kulo mcimbi. Kukhulunywa nge i-Chromecast entsha enamandla futhi esebenzayo kunamamodeli wamanje, kodwa futhi negajethi lokho izophinda kabili intengo yayo uma iqhathaniswa nentengo yamanje, abaningi sebevele bekhuluma ngomlamuleli onjenge-Apple TV noma iFire TV.
Kulokhu asinabo ubufakazi obuningi bokuthi izinkomba zamawebhusayithi amaningi anemibhalo, kepha kufanele sikhumbule ukuthi muva nje i-Amazon ivuselele amanani we-Amazon Echo yayo, yethula i-Amazon Echo Dot eshibhile futhi enamandla. Okuthile okungaba yimpendulo ye-Amazon kusongo olufana neKhaya leGoogle. Kunoma ikuphi, noma ngabe siyayibona noma cha le divayisi, kubonakala ngathi umcimbi omusha we-Google uzoba mnandi kakhulu futhi hhayi kulabo abathanda omakhalekhukhwini kuphela kodwa labo bethu abanentshisekelo yokuzama amagajethi amasha nemisebenzi emisha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ukuzenzakalela kwasekhaya » I-Google Home izoshibha kune-Amazon Echo